धनुषामा चट्याँग (ठनका) !
नगरका मेयर उदय कुमार बरबरियाले वृक्ष अति पुरानो तथा सुकेको र चट्याँग लागेर नष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
२३ चैत, २०७५ || प्रकाशित १३:१३:००
न्यूज ब्यूरो, धनुषा । आज विहान भएको मौसम खराबपछि देशभरिकै जनजीवन प्रभावित रहयो ।
मौसम पूर्वानुमान विभागले आज देशैभरि हावाहुरी, असिना पानी तथा बर्षा हुने संकेत दिएका थिए । यसैक्रममा धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकामा एक सुकेको वृक्षमा चट्याँग लागेको छ । शहिदनगर नगरपालिकाको वडा नं. ८ डुमरियाचोक स्थित रहेको कटहरको वृक्षमा विहान हावाहुरी र वर्षासँगै आएको चट्टयाँग लागेर वृक्षलाई बीचौबीच दुई भाग गरिदिएका छन् ।
डुमरिया चोकभन्दा केही भित्र पुरानो वृक्ष उपर विहान करिब ८ बजेतर्फ चट्याँग लागेको स्थानीय रँजीत यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार वृक्ष पुरानो थियो र चट्याँग लागेपछि दुई फाँक गरिदिएका छन् ।
यता, नगरका मेयर उदय कुमार बरबरियाले वृक्ष अति पुरानो तथा सुकेको र चट्याँग लागेर नष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले चट्याँग लागेको वा नलागेको यकिनका साथ भन्न नमिल्ने तर स्थानीयहरुले भने अनुसार चट्याँग नै लागेर कटहरको वृक्षमा चीरा पारेको छ ।
उनले भने, - 'यसबाट कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन ।'
यसैबीच, झापामा चट्याङ लागे एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर १५ का ४० वर्षीय प्रकाश राउत रहेका छन् । चट्याङ लागेर प्रकाश राउतकी श्रीमती सुनिता राउत र मञ्जु राउत पनि घाइते भएका छन् ।
बिहान ८ बजेतिर खेतमा काम गरिरहेका बेला चट्याङ लागेर रावतको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।प्रहरीका अनुसार चट्याङ लागेर घाइते भएका दुवै जनाको चन्द्रगढी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।